Vaovao Mafana · Mey, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Mey, 2013
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Mey, 2013
Azia Atsimo 20 Mey 2013
Amerika Latina 18 Mey 2013
Azia Atsimo 17 Mey 2013
Afrika Mainty 14 Mey 2013
Amerika Latina 08 Mey 2013
Nahafatesana olona 19 sy naharatrana olona 36 farafahakeliny ny fipoahana fitoerana gazy iray araka ny tatitra farany. Ny maraimben'ny 7 mey 2013 no nitrangan'izany fipoahana izany tao Ecatepec de Morelos County (Fanjakan'i Mexico). Ao anatin'ny faritra midadasik'i Mexico i Ecatepec. Ny gazety meksikana El Universal [es], ao amin'ny aterineto, no iray amin'ireo sehatra voalohany nilaza ny vaovao mafana:...
Afrika Mainty 08 Mey 2013
Notsaohan'ny tontolon'ny bilaogy afrikana ny fanendrena an'i Cécile Kyenge, profesora mpitsabo avy amin'ny mpiavy, ho eo amin'ny toeran'ny Ministre de l'Intégration ao anatin'ny governemanta italiana.
Tiorkia 04 Mey 2013
Kandidà Tsy Nampoizina Fifidianana Eto Madagasikara
Afrika Mainty 04 Mey 2013
Fanamarihana : Raha mijery ny lahatsoratra niavian'ity dikan-dahatsoratra ity isika dia tamin'ny 28 avrily no nanoratana ny tamin'ny teny anglisy, nisy ny fanavaozana tamin'ny 29 avrily, nefa tsy nampiova ny zava-misy ny lohateny fa nisy ny kandidà tsy nampoizina na dia efa nampoizina ihany aza tanatin'ity lahatsoratra ity. Tsy maintsy...